November 22, 2013 – democracy for burma
On November 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
BANGKOK, Nov 22 – Thailand and Myanmar have agreed to jointly develop the Dawei deep seaport mega projects and find new investors to replace Italian-Thai Development Company (ITD) which has suspended its operations.
Thai and Myanmar officials met in ataBangkok hotel yesterday for the fourth Joint Coordinating Committee (JCC) during whichamemorandum of understanding was signed by the Dawei Special Economic Zone Authority (DSEZ) and Dawei SCZ Development Co.
Dawei SCZ Development isaThai-Myanmar joint venture with an initial registered capital at Bt12 million.
Italian-Thai Development has decided to cease operations due to financial difficulties after having invested about Bt6 billion (more than US$185 million). Its investment privileges will be transferred to the Dawei SCZ Development.
Deputy Prime Minister/Commerce Minister Niwatthamrong Boonsongpaisan, who represented the Thai delegation in the joint coordinating meeting, said auctions for the Dawei development project will include two stages, starting with bids for infrastructure development.
The second stage will involve concessionaires for mega projects withacombined investment of Bt300-400 billion, covering an area of 200 square kilometres or about 200,000 rai.
Premchai Kanasutra, Ital-Thai president, said the company is willing to enterajoint venture with Rojana Industrial Park in the second phase of development which will need an initial investment of no less than Bt100 billion.
U Sett Aung, deputy governor of the Myanmar central bank, said Japanese investors were invited to invest in the mega project.
Japan may announce its plan to join other investors in Dawei at the 40th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation summit, to be held in Japan next month, he said. (MCOT online news)
THAILAND: Seven-year-old Myanmar boy found with yaba stash
KANCHANABURI – A seven-year-old Myanmar boy with onlyabackpack was found crying ataroadside in Thong Pha Phum district after being tricked into carrying almost 10,000 methamphetamine pills.
Officers were looking for information on his identity and opened his backpack. Inside they found two plastic baby powder bottles which seemed unusually hard and discoveredatotal of 50 packs of yaba or 9,953 pills inside.
The boy said he lived in Myanmar’s Phaya Tongsu district, which connects to Thailand via the Three Pagodas Pass in Sangkhla Buri distirct. He said he lived with his mother but had travelled to Thailand with his uncle and another man and woman.
On November 22, 2013 November 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရှေ့တန်းမှ KIA စစ်သားများ။
kng 22.nov.2013 ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တပ်မဟာ (၃) တပ်ရင်း (၁၂) ဒေသတွင် အစိုးရတပ်များအား ချောင်းပစ်ခြင်း ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုရန် KIO ဗဟိုဌာနချုပ်မှ ညွှန်ကြားထားသော်လည်း တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။
“အထက်လူကြီးတွေက သွားပြီးမပစ်ဖို့ ချောင်းပြီးမပစ်ဖို့ပြောတာ သူတို့ဘက်က ပုန်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ရှိတဲ့နေ ရာကိုလာပစ်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး ပစ်ရတော့တာ အစိုးရတပ်ကအထက်တောင်ကနေ ဝိုင်းပြီးလာတာ” ဟု KIA တပ်ရင်း ၁၂ တပ်ရင်းမှူးဗိုလ်မှူး ဂျွန်းအောင် KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ယမန်နေ့ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီချိန်တွင် အစိုးရတပ် စကခ ၂၁ အောက် နည်းဗျူဟာ (၁၊ ၂၊ ၃) မှ စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်း အင်အား ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် နမ်လင်းပါအနီးရှိ KIA တပ်ရင်း (၁၂) ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၁၂ ရှိသည့် နမ်လင်းပါဒုက္ခသည်စခန်းကို ယမန်နေ့ညတွင် အစိုးရတပ်မှ သိမ်းပိုက်လိုက်သော်လည်း ယနေ့တွင် ၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဆန်အိတ် ၅ အိတ်ကိုသယ်ပြီး စခန်းမှ ယာယီပြန်ဆုတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့် အစိုးရတပ်ဖက်မှ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုသော်လည်း အတည်ပြုချက်မရရှိခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လမှ ယခုချိန်ထိ အစိုးရတပ်များနှင့် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများအတွင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ရင်း (၁၂) ဖက်တွင် စစ်သား ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု တပ်ရင်းမှူးကပြောသည်။
MYANMAR BURMA: KIA တပ်များရှင်းပေးရန်နှင့် ကောင်လွင်ရွာ ရှမ်းဒုက္ခသည်များအား ကူညီပေးရန် ရှမ်းနီပါတီတောင်းဆို
KIA တပ်များရှင်းပေးရန်နှင့် ကောင်လွင်ရွာ ရှမ်းဒုက္ခသည်များအား ကူညီပေးရန် ရှမ်းနီပါတီတောင်းဆို
CREDIT U KAWLAY
MYANMAR-BURMA: UNFC နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဆွေးနွေးပွဲမှ UNFC ဒု- ဥက္ကဌ ၏ အဖွင့်အမှာစကား
UNFC နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဆွေးနွေးပွဲမှ UNFC ဒု- ဥက္ကဌ ၏ အဖွင့်အမှာစကား
ဘင်္ဂလီ မိစ္ဆာကြောင်း ဒီလိုကြေကွဲ မျက်ရည်ကျနေရပြီလေ..ဟူး.
PHOTOCREDIT KHIN ZAW
စောသီရိရည်မွန်နှင့်စောအေးသန်းနွယ်တို့ ကိုကြာညိုပြင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ရန်အဖွဲ့ မှစေ
လွတ်ခဲ့သည်။သမီးငယ်ယဉ်ငြိမ်းအေးမှာ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ၁၉ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီအချိန်တွင်ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်ပေါင်းများစွာနှင့်
အပေါက်ဝဆရာဝန်၏ဆေးစစ်ချက်အရသမီးငယ်မှာလူနှစ်ဦး၏ပြုကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးသူမ၏သားအိမ်များပြိုကွဲပေါက်ပြဲသွားသည်ဟုသိရှိခဲ့ရသည်။
ငြိုးကြီးစွာဖြင့်ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ထားခြင်းကိုစိတ်မကောင်းစွာမြင်တွေ့ ခဲ့ရသည်။
သူမ၏အလောင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူမိုးမိုးစံရောက်အောင်စောင့်ဆိုင်းထားပြီး ၂၁-၁၁-၂၀၁၃ ခုမွန်း
လွဲ ၃ နာရီအချိန်လောက်တွင်စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာအတိဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ရသည်။
မိမိတို့ အဖွဲ့ မှသမီးငယ်အတွက်အလူုငွေတချို့ ကိုလူုဒါန်းခဲ့ပြီးကြေကွဲမဆုံးဖြစ်နေသောသူမ၏
ကြာညိုပြင်ကျေးရွာသည် ကုလား (ဘင်္ဂလီနွယ်ဖွားမူဆလင်) ရွာနှင့်တဆက်တစပ်တည်းရှိနေသည်။
HMUU ZAW: ★နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်တင်၏ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း ကန့်ကွက်ချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ★
★နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်
ဦးကျော်တင်၏ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း ကန့်ကွက်ချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ★
♦ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကိုရွေးချယ်ပြီး ညီလာခံတွင်တရားဝင်တင်ပြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှု ကို မိမိတို့ကန့်ကွက်လိုကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်က ပဏမအနေဖြင့် ထပ်မံအတည်ပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ ကုလ၏ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အစီရင်ခံစာအဖွဲ့ (UPR) သည်သာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို မျှတစွာ ဖြေရှင်းရမည့် တစ်ခုတည်းသော စောင့်ကြည့်သည့် ယန္တရား ဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့ ယုံကြည် ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှာ ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များ၏ ဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် ခိုင်မာအားကောင်း လာစေရန် စစ်မှန်သော စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေခံများပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်ဟု လည်း မိမိတို့ ယုံကြည် ပါသည်။
► ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံး မြန်မာ သဘောမတူ
♦ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းပါအချက်များ အားလုံးကို မိမိတို့သဘော မတူနိုင်ကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် ပြောကြားလိုပါသည်။ မူကြမ်းပါ အချို့စာပိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ဘက်မှ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့ဘက်မှ ပန်ကြားချက်များ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော် လည်း ကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက် အမှတ်(၅)၊ (၁၀) နှင့်(၁၄) တို့တွင် ထိလွယ်ရှလွယ်သည့် သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သော ရေးသား ဖော်ပြချက်များ ပါရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
♦ မည်သည့်နိုင်ငံမျှ လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများတွင် စင်းလုံးချောပြီး ပြည့်စုံခြင်း မရှိသည်ကို မိမိတို့အားလုံး သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ခြွင်းချက်ထားရမည့် နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ တိုင်းပြည်တွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှု အချို့ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် သဘောထား မှတ်ချက် အမှတ်(၅) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဖော်ပြချက်ကို လက်သင့်ခံရန် ခက်ခဲကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းမှတ်ချက်တွင် စစ်ဆေး အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသည့် စွပ်စွဲချက် များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
♦ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အရှိန်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ယခင်မရှိခဲ့ဖူးသည့် လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေး ပွင့်လင်းလာမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အချို့သော ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူများက ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အကြမ်းဖက်မှုများကို ကံမကောင်း အကြောင်း မလှစွာဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရမှုများကို စိုးရိမ်နေမှုများအား မိမိတို့လဲ မျှဝေခံစားမိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင် မမှန်မကန်ပါရှိ သကဲ့သို့ ဘာသာတရား တစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ပြီး တိုက်ခိုက်မှု မဟုတ်ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ် အကြားတွင် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောကြား လိုပါသည်။ မြန်မာပြည်၏ တခြားသော ဒေသများတွင် ကွဲပြားခြားနားသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အမျိုးမျိုးမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် ဟန်ချက်ညီစွာ တည်ရှိနေလျက်ရှိပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းရန် အပူတပြင်း လိုအပ်လျက်ရှိသည်ကို မိမိတို့ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
♦ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုများပြန်လည် ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ များကို လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် အစိုးရ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူများ၏ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်နေမှုရှိသည် ဆိုသည့်အချက်ကို အရေးကြီး ဆုံး အချက်အနေဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။ မကြာခင်က မြန်မာပြည်သို့ အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်ချိန်တွင် အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ပစ်ရန် အရပ်သား ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ် ပေးရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့် များအား အပြည့်အဝ လေးစားလိုက် နာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်တို့အတွက် အာမခံကြောင်း မြန်မာအစိုးရက တုံ့ပြန်ပြောကြား ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မတူညီ အချင်းချင်း စေ့စပ် ဆွေးနွေးမှုများ အားပေး မြှင့်တင်ရန် လူထုချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့များကို ပေးအပ်ရေးတို့ကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အစိုးရက ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့ သည့် အစ္စလာမ္မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူထုချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အခုထက် ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးအတွက် အသင့်ရှိသည် ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
♦ အဆိုပါ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ အကြောက် တရား များ၊ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များ ဆုံးရှုံးရမှုများကို လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ် စလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် မျှဝေခံစားမိသည့် အနေဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးတွင် သည်းညည်း ခံမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု တို့ကို မြှင့်တင်ရန်၊ အဆိုပါ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ်၏ အခြေအနေတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှု များကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်စေရေး အတွက် တောင်းဆိုမှုများအတိုင်း မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ်က ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် သဘောတူပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျှင်မူ ဆိုခဲ့ပါ စီမံဆောင်ရွက်မှု များမှာ မြန်မာအစိုးရက ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များပင် ဖြစ်ပါသည်။
► ရိုဟင်ဂျာ မရှိ
♦ အထက်ဖော်ပြပါ သဘောထားမှတ်ချက်တွင် “ရိုဟင်ဂျာ လူနည်းစု” ဟူသည့် စကား အသုံးအနှုန်းကို ယခင်ကာလများကအတိုင်း ဆန့်ကျင်ကြောင်း မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ်က တုံ့ပြန်ပြောကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော လူမျိုးစု ၁၀၀ ကျော် အနက် ထိုကဲ့သို့သော လူမျိုးစုတစ်စု မည်သည့်အခါကမှ မရှိခဲ့ဆိုသည့်အချက်မှာ အဆိုပါ အသုံးအနှုန်းနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါသည်။
► ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအရသာ
မည်သို့ဆိုစေကာမူ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ သွားလာ လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်များ ရယူအသုံးပြုမှုကဲ့သို့ သော အခြားမည်သည့် တောင်းဆိုမှုများအပြင် နိုင်ငံသား ခံယူခွင့် တောင်းဆိုမှုတို့ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေများ တည်ဆဲ ဥပဒေအောက်တွင် ရှိသော လုံခြုံရေးအခြေအနေ များနှင့် အညီ ထည့်သွင်းစဉ်းစား သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
► လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး Continue reading “HMUU ZAW: ★နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်တင်၏ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း ကန့်ကွက်ချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ★” →
MYANMAR: Ethnic and Democratic Political Parties meeting with Ceasefire Armed Ethnic Organizations led by UNFC
“This is something we couldn’t even dream of, and it signifies that political changes are taking place [in Burma] – by allowing political leaders in the country to meet with their brothers and sisters in exile. While it might not be considered substantial, the opportunity to meet with the exiled activists is priceless.”
— Zozam, chairman of the Chin National Party, speaking at Chiang Mai airport as he arrived foratwo-day meeting between Burmese political parties and ethnic armed groups. -CREDIT DVB
22 November 2013 by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
အစိုးရ၏ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် မူကြမ်း အပေါ် အချက်အလက် အများစုသည် လက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိဟု ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) ၏ နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့က ပြီးဆုံး သွားသော (၃) ရက်တာ ကျင်း ပသည့် ဗဟို ကော်မီတီ အစည်း အဝေးမှ သုံးသပ် ခဲ့သည်ဟု ဒုတိယ ဥက္ကဌ ခူဦးရယ်က ဆိုပါသည်။
“ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ အကျဉ်းချုပ် ပြောရရင် လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ် စွန့်လွတ် ရမယ့် ကိစ္စ၊ ဒို့တာဝန် အရေး သုံးပါး ကိစ္စ၊ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေ ကိစ္စ၊ အခြေခံ ဥပဒေ ကိစ္စ၊ စောင့်စည်း လိုက်နာ ရမယ့် ကိစ္စ၊ မြန်မာ ရဲတပ်ဖွဲ့ တွေက အပစ်ရပ် နယ်မြေ တွေမှာတရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ တင်မယ့် ကိစ္စ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ ကိစ္စ တွေပေါ့ အဲဒါ တွေမှာ လက်ခံရ ခက်ခဲ နေပါတယ်” ဟု၎င်းမှ ဆိုပါသည်။
KNPP သည် အာမခံချက် ရှိသည့် အပြင် အပြုသဘော ဆောင်ပြီး နှစ်ဦး နှစ်ဖက် လက်ခံ နိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်လာရန် ဆွေးနွေး သင့်ကြောင်း၊ဤအခြေ အနေမျိုး ရရှိရန် နှစ်ဖက် စလုံးမှ အလျော့အတင်း ပြုလုပ် ရမည် ဖြစ်သည်ဟု KNPP က ခံယူကြောင်း ဆိုပါသည်။
KNPP ၏ ထိုသုံးသပ် ချက်ကို နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး လိုင်ဇာ ညီလာခံ၌ ဖွဲ့စည်း ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များစုပေါင်း ဖွဲ့ထားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (NCCT) သို့ တင်ပြ ပေးပို့ ရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း KNPP သည် သုံးသပ်ချက် များကို အချောသပ် နေသဖြင့် ၂၁ ရက် နေ့မှပင် ပေးပို့နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရ၏ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် မူကြမ်း အပေါ် အဖွဲ့ဝင် များမှ ပေးပို့သော သုံးသပ်ချက် များကို စုပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC သည် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ အပါဝင် (UNFC) အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သော အဖွဲ့ များ၏ သဘောထား ရယူရန် လာမည့် ဒီဇင်ဘာ လဆန်း ၌ ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး (KNU) နယ်မြေတွင် ကျင်းပရန် လျာထားသည့် ဒုတိယ အကြိမ် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ ညီလာ ခံသို့ တင်ပြပြီး အဆုံးအဖြတ် ယူမည်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုပါသည်။
KNPP သည်မြန်မာ နိုင်ငံ၏အနာဂတ် အရေးကိုဆွေးနွေး နိုင်ရန်အတွက်အစိုးရ အစီစဉ်ဖြင့် ရောက်လာသောပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ များအား ကြိုဆိုကြောင်း၊ ယင်းအဖွဲ့ များနှင့် ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ(၂၂) ရက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးရန် ရှိပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်တွင် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှု မျိုးအတွက် လာရောက် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ကြမည်ဟု ယူဆကြောင်းဆိုပါသည်။
အကယ်၍ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီ များမှ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုး သင့်သည်ဟု အကြံပြု လာသည့် အခါ ၄င်း အကြံပြု ချက်၏ အတိမ် အနက်ကို လက်ခံ စဉ်းစားမည် ဖြစ်သည်။
တဖက်၌ လည်း ပြည်တွင်း ပါတီ များအား အခြေအနေ မှန်များကို တင်ပြခွင့် ရသည့် အတွက် လက်မှတ် ထိုးသင့်၊ မထိုးသင့် ဆိုသည့် အကောင်းဆုံး အဖြေမှန်ကို မှန်မှန် ကန်ကန် သုံးသပ် နိုင်မည် ဖြစ်သည် သုံးသပ် ထားပါသည်။
KNPP သည် အစိုးရ၏ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက် စာချုပ် မူကြမ်းအား သုံးသပ် ရာတွင်အခြား UNFC အဖွဲ့ များ၏ သုံးသပ်ချက် အမြင် များနှင့် တူညီမှု ရှိကြောင်း ဆိုပါသည်။